Umyeni uboshwe eyolobola - Ilanga News
Home Izindaba Umyeni uboshwe eyolobola
Umyeni uboshwe eyolobola
Kuthiwa amaphoyisa agasele kukuhle kwasuka isixakaxaka izimenywa zilwela umsolwa
UTHELEKE ngehlazo umndeni wakwaMbatha elokishini laseMondlo, esigcemeni sakwa-B, eVryheid, kubhuntsha umcimbi wamalobolo, umkhwenyana washaqwa ngamaphoyisa esolwa ngokuba yisela eseliziqedile izinkomo zabantu. Lesi sigameko kuthiwa senzeke ngoMgqibelo, lapho umsolwa okulindeleke ukuthi avele kusasa enkantolo, eshaqwe ngamaphoyisa ambompha phambi kwabasekhweni lakhe, esolwa ngenqwaba yamacala ahlanganisa ukuntshontshwa kwezinkomo.
Imithombo yaleli phephandaba iveze ukuthi kuthe kusahleliwe nje kukuhle ekhweni lomsolwa, kwatheleka inqwaba yamaphoyisa ezoshaqa umkhwenyana okuthiwa ubesenesikhathi eside efunwa ngamaphoyisa ngamacala amathathu okutholakala nezinkomo ezintshontshiwe abengasaveli enkantolo, ewabalekela.“Umsolwa yisela elaziwayo nje, unamacala awahambayo okuyimanje mathathu asolwa ngokutholakala nezinkomo ezebiwe. Ngenxa yokuthi amaphoyisa kade ayemfuna, kukhona abawalume indlebe ngokuthi uzobe esekhweni lakhe ngoMgqibelo, ehamba nabakhongi kuhanjiswe izinkomo zamalobolo,” kusho umthombo.
Kuthiwa amaphoyisa atheleke ekhweni, afuna umkhwenyana nokuthiwa kakwehlanga kahle kwabebehambele umcimbi. Ngokuthola kwe LANGA, kuthiwa amaphoyisa athwale kanzima, abebekhona befuna ukwazi ukuthi uboshelwani umkhwenyana kusekuhle kusaphuzwa
notshwala besintu. “Ngoba isimo bese sisibi kakhulu namaphoyisa awakwazanga ukulokhu echaza izinto eziningi ngenxa yesimo ebesingesihle, kwazise abasekhweni bese belwa nomakhelwane abebekhona, bengayizwa eyokuboshwa komkhwenyana eqeda ukubolola,” kusho umthombo.
Kuthiwa umsolwa ubehambise izinkomo eziyisithupha ekhweni lakhe elobolo isinqandamathe sakhe uNkz Xoli Mbatha. Umsolwa lona kuthiwa unecala abelihamba enkantolo yaKwaCeza elavulwa ekuqaleni kwalo nyaka. Kuthiwa bese kunezinyanga engalubhadi enkantolo, namaphoyisa esemfune ancama. “Njengoba eboshiwe ubengaphandle ngebheyili. Unamacala amathathu abhekene nawo enkantolo. Sekunesikhashana amaphoyisa emfuna engatholakali, nokuthe uma ezwa ukuthi uyolobola abe esegasela ekhweni,” kusho umthombo.
Ethintwa uNkz Mbatha lona obehanjiselwa izinkomo, uvumile ukuthi umyeni wakhe ushaqwe ngamaphoyisa ngesikhathi kuqedwa nje ukukhi-shwa kwezinkomo zamalobolo. Ube esecela ukuthi athintwe ngemuva kwemizuzu emibili. Ngesikhathi ILANGA selimthinta ubhoke ngolaka wathi: “Uhlanganaphi nokuboshwa komyeni wami, uze ungifonele nje ungenaphi? Uqede ukusho lokho wavala ucingo kusakhulunywa naye. Ngokuthola kwaleli phephandaba, lezi zinkomo eziyisithupha okulotsholwe ngazo kwaMbatha, amaphoyisa akhiphe umyalelo wokuthi zingenziwa lutho ngoba asafuna ukuphenya ngazo ukuthi kakuzona yini ezokwebiwa.
Isazi samasiko uDkt Bhedlindaba “VVO” MKhize, sithe
umndeni wakwaMbatha kumele ushise impepho ubike ukuthi umkhwenyana ufikile ezolethela indodakazi yabo amalobolo kodwa izinkomo bacela bangaqale bazamukele abangasekho. “Uma kutholakala ukuthi lezi zinkomo umkhwenyana abezolobolo ngazo zebiwe, sekuyophoqa ukuthi zibuyiselwe emuva bese umkhwenyana egeza umuzi wasekhweni ngembuzi, axolise. Lokhu uzobe ekwenza ngoba kuzobe kufana nokuthi ekhaya ulethe into engcolile,zs ngakho-ke kuzomele ageze umuzi wasekhweni lakhe,” kusho yena. Okhulumela amaphoyisa Kwa-Zulu-Natal, uLt-Col Nqobile Gwala usiqinisekisile lesi sigameko, wathi umsolwa kulindeleke ukuthi avele enkantolo maduze.
Previous articleYELULA ISANDLA INYUNYANA KWABALAHLEKELWE
Next articleSikhulu isililo ngokuminza kwephoyisa ebeliyotakula abantu